လသာညတွေမှာ စောင်းသံတွေကြားနေရတဲ့ ဘုရား – Myanmar Breaking News
Homepage / Amazing / လသာညတွေမှာ စောင်းသံတွေကြားနေရတဲ့ ဘုရား
လသာညတွေမှာ စောင်းသံတွေကြားနေရတဲ့ ဘုရား
တကယ်တော့ ခင်ဗျားဧည့်သည်က ပေါက်ပေါက်ရှာရှာမေးလာတဲ့အခါ မြောက်ဘက်ဟိမဝန္တာတောင်ကသူတော်စင်တွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကိန်းအောင်နေအောင်လှည့်ထားတာလို့ ပြောပေါ့..
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအေဒီ ၄ ရာစုကနေ ၉ ရာစုအတွင်း စေတီ ဂူကျောင်းဘုရားတည်တတ်လာပါပြီ…
သရေခေတ္တရာမြို့ ဟောင်းက ဘဲဘဲဂူဘုရား.. လေးမျက်နှာဂူဘုရားတို့ကို သက်သေအဖြစ်မြင်တွေ့နိင်ပါတယ်….
ရှေးရှေးတုန်းကတော့ အသံ အလင်းတို့ရဲ့အနှောက်အယှက်အနည်း ဆုံးဖြစ်အောင် ဝင်ထွက်ပေါက်တစ်ဘက်သာထားပြီး တရားအားထုက်ရာဂူ ၊ နောက်ပိုင်း ဆင်းတုတော်တည်ထားပြီး ကိုးကွယ်ရန်အတွက်လည်းကောင်း ဘုရားဖူးများဝင်ရောက်အာရုံပြု ရန်အတွက်လည်းကောင်းရည်ရွယ်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ကျောက်ဆစ် ပန်းချီ ပန်းပု အင်္ဂတေပန်းလက်ရာတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်တည်ဆောက်လာကြတာ ကျန်စစ်သားမင်းလက်ထက် ၁၁ ရာစုမှာ ဗိသုကာလက်ရာအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်..
အာနန္ဒာကို ဥပမာပေးလို့ရပါတယ်….ဒီလောက် ဘာသာတရားကိုင်းရှို င်းပြီး ကုသိုလ်ပြု ဘုရားတည် တဲ့သူဟာ လူ နှစ်ယောက်ကို သူကုသိုလ်ပြု ထားတဲ့ ဂူဘုရားထဲမှာ သတ်ပါ့မလား။တကယ်တော့ ပုဂံရာဇဝင်ကိုပြောရင် ဓားထမ်း၊ တုတ်ထမ်းပြောရမယ်တဲ့….။ အကြိတ်အနယ်ငြင်းခုံရမယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ ။
ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင် အဆိုပါ တဝဂူဘုရားမှာ စောင့်နေပါ့မယ်…
ဒို့ပုဂံက တဝဂူ – သတိုးရွှေမှင်
လသာညတှမှော စောငျးသံတှကွေားရတယျဆိုတဲ့ ဘုရား…
တကယျတော့ ခငျဗြားဧညျ့သညျက ပေါကျပေါကျရှာရှာမေးလာတဲ့အခါ မွောကျဘကျဟိမဝန်တာတောငျကသူတျောစငျတှရေဲ့မတ်ေတာဓာတျတှကေိနျးအောငျနအေောငျလှညျ့ထားတာလို့ ပွောပေါ့..
ကြှနျတျောတို့မွနျမာတှအေဒေီ ၄ ရာစုကနေ ၉ ရာစုအတှငျး စတေီ ဂူကြောငျးဘုရားတညျတတျလာပါပွီ…
သရခေတ်ေတရာမွို့ ဟောငျးက ဘဲဘဲဂူဘုရား.. လေးမကျြနှာဂူဘုရားတို့ကို သကျသအေဖွဈမွငျတှနေိ့ငျပါတယျ….
ရှေးရှေးတုနျးကတော့ အသံ အလငျးတို့ရဲ့အနှောကျအယှကျအနညျး ဆုံးဖွဈအောငျ ဝငျထှကျပေါကျတဈဘကျသာထားပွီး တရားအားထုကျရာဂူ ၊ နောကျပိုငျး ဆငျးတုတျောတညျထားပွီး ကိုးကှယျရနျအတှကျလညျးကောငျး ဘုရားဖူးမြားဝငျရောကျအာရုံပွု ရနျအတှကျလညျးကောငျးရညျရှယျခဲ့ဟနျတူပါတယျ။ကြောကျဆဈ ပနျးခြီ ပနျးပု အင်ျဂတပေနျးလကျရာတှနေဲ့ တနျဆာဆငျတညျဆောကျလာကွတာ ကနျြစဈသားမငျးလကျထကျ ၁၁ ရာစုမှာ ဗိသုကာလကျရာအမွငျ့ဆုံးရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ..
အာနန်ဒာကို ဥပမာပေးလို့ရပါတယျ….ဒီလောကျ ဘာသာတရားကိုငျးရှို ငျးပွီး ကုသိုလျပွု ဘုရားတညျ တဲ့သူဟာ လူ နှဈယောကျကို သူကုသိုလျပွု ထားတဲ့ ဂူဘုရားထဲမှာ သတျပါ့မလား။တကယျတော့ ပုဂံရာဇဝငျကိုပွောရငျ ဓားထမျး၊ တုတျထမျးပွောရမယျတဲ့….။ အကွိတျအနယျငွငျးခုံရမယျ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျပါ ။
ကြှနျတျောပွောတာမယုံရငျ အဆိုပါ တဝဂူဘုရားမှာ စောငျ့နပေါ့မယျ…
ဒို့ပုဂံက တဝဂူ – သတိုးရှမှေငျ
Posted in Amazing, General
Previous post သေရွာပြန် ၃ နှစ်သမီးလေး
Next post မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ “ယောက်ျားတို့ မာယာ” မိန်းကလေးတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်